Qalabka kombiyuutarka PC
Sababta oo kale Windows10 uma shaqeynayo keligiis
Ka qaad lacagtaada WebMoney
Articles Interesting - April 6,2020
Maxaa la sameeyaa haddii aad jabisay Instagram
Muuqaalka Muuqaalka Microsoft: ka soo kabashada emails la tirtiray
Articles Interesting 2020
Dhakhtarka D-Soft Flash 1.4.1
Barnaamijka D-Soft Flash Doctor waa barnaamij xirmo oo isku xiran oo loogu talagalay in lagu shaqeeyo leylisyo adag iyo flash drives. Awood u leh inuu ku dhejiyo oo dib u soo celiyo darawallada iyadoo la adeegsanayo qaabka hooseeya. Intaa waxaa dheer, in Dhakhtarka D-Soft Flash, hawsha sameynta iyo qorista sawirada flash drives waa "kuxirta".
Qalabaynta D-Link DIR-320 NRU Beeline
Ma ayan cidna u dallacin: 25 su'aasha ugu macquulsan ee Jawaabaha Mail.ru
Dadka ka saar wadahadalka VKontakte
Abuur qoraalka munaasabadda Sawirka
Ku xiridda kamarad kombuyuutar
Hagaajinta qulqulka barnaamijka BitTorrent
Waa maxay wabiga
Abuuri oo ku dheji qoraalka Sawirada
Server DLNA Windows 10
Cloud Mail.ru 15.06.0853
Sidee loo cusbooneysiiyaa BIOS Hooyo
Sidee loo kantarooli karaa kombiyuutarka
Samee baadhitaano adag oo ku saabsan Windows 10
Sida loo isticmaalo mashiinada VirtualBox iyo Hyper-V oo isku computer ah
Haddii aad isticmaasho mashiinada VirtualBox oo ah xitaa haddii aanad ka warqabin: badiyayaal badan oo Android ah ayaa sidoo kale ku salaysan VM-da) iyo rakibida mashiinka loo yaqaan "Hyper-V" (qalabka dhismaha ee Windows 10 iyo 8 oo gooni ah), waxaad ku arki doontaa xaqiiqda Mashiinnada aaladaha VirtualBox ayaa joojin doona socodka.
Sida loo doorto router
Beddelka xirmooyinka heerarka shabakada waxaa sameeya qalab gaar ah - router, oo loo yaqaano router. Fiilo ka timaadda bixiyaha iyo kombiyuutarada shabakada guryaha ayaa ku xiran yihiin dekadaha udhaxeeya. Waxaa intaa dheer, waxaa jira tiknoolaji Wi-Fi ah oo kuu ogolaanaya inaad ku xirto internetka oo aan lahayn fiilooyin. Qalabka isku-xirka ee lagu rakibay guriga wuxuu sidoo kale mideynayaa dhammaan ka qaybgalayaasha hal shabakad maxalli ah.
Ku rakib faylasha TAR.GZ ee Ubuntu
Mss32.dll hagaajinta maktabadda
DLLs waa mid ka mid ah kuwa inta badan la isticmaalo iyo isla markaa noocyada faylalka dhibaatada ah ee nidaamka hawlgalka. Xaaladaha badankood, khaladaadka ay la socdaan waxay dhacaan marka isku dayayaan in ay bilaabaan ama rakibaan codsiyada qaarkood. Gaar ahaan, mss32.dll waa faylka noocan oo kale ah oo ka mas'uul ah hawlgalinta ciyaartoyda maqalka iyo fiidiyaha.
Mozilla Firefox xayeysiiska qalabka xayeysiinta
Internetka, marka lagu daro content xiiso leh, waxaa jira xaddi weyn oo xayaysiis ah oo faragelinaysa daraasadda caadiga ah ee bogagga shabakadda. Uma baahnid inaad aragto dhammaan xayeysiisyada, sababtoo ah wakhti kasta waxaad ku xiran kartaa xayeysiiyaha xayeysiiska ah iyo si joogta ah u xayira xayeysiiska Mozile. Xayeysiiska xayeysiiska ee Firefox waa khariidad gaar ah oo kuxiran oo kuu ogolaaneysa inaad si buuxda u tirtirto browserka Mozilla Firefox nooc kasta oo xayaysiis ah: unugyada xayeysiisyada ku-meel-gaadhka ah, daaqadaha soo-baxa, xayeysiis ah oo joojiya daawashada fiidiyowga, iyo in ka badan.
Iskuulada ugu fiican ee kombuyuutarku ka wanaagsan yahay: Asus ama Gigabyte
Qaybta ugu muhiimsan ee PC waa hooyada, kaas oo ka masuul ah isdhexgalka saxda ah iyo qalabka tamarta ee dhammaan qaybaha kale ee la rakibay (processor, kaadhka video, RAM, drives). Isticmaalayaasha kombiyuutarada ayaa badanaa la kulmaan su'aasha ah waxa ka wanaagsan: Asus ama Gigabyte. Waa maxay farqiga u dhexeeya Asus iyo Gigabyte? Sida laga soo xigtay dadka isticmaala boorsooyinka ASUS waa kuwa ugu wax soo saar badan, laakiin Gigabyte waa mid xasilloon, marka la eego hawlaha, waxaa jira farqi u dhexeeya jardiinooyin kala duwan oo lagu dhisay jeebka isku mid ah.
Nidaamkan waxaa mamnuucay siyaasadda uu dejiyey maamulaha nidaamka - sida loo saxayo
Sidee loo arki karaa faylasha qarsoon iyo faylasha? ACDSee, Taliyaha guud, Explorer.
Waxa la samaynayo haddii kaadhka fiidiyowga uusan muujin sawirka kormeeraha
Haddii kumbuyuutarku soo baxo, waxaad maqashaa codka oo aad aragto calaamadaha iftiinka ee kiiska, laakiin sawirka lama soo bandhigin, markaa dhibaatadu waxay ku dhejin kartaa kaadhadhka fiidiyowga ama khaladaadka khaldan ee qaladka. Maqaalkani waxaan eegaynaa dhowr siyaabood oo lagu xallinayo dhibaatada marka kaarka sawirku uusan u wareejin sawirka kormeeraha.
Sida looga saari karo xayeysiisyada gudaha VK
Shabakada bulshada ee Vkontakte waa adeeg bulsho ee caanka ah ee Ruushka, oo shaqadiisa ugu weyni tahay in la raadiyo lana xiriiro asxaabta. Goobta Vkontakte waxay leedahay xidhiidh macquul ah oo user-saaxiibtinimo leh oo kaliya qaybta dheeraad ah - advertising. Maanta waxaan eegeynaa sida xayaysiinta shabakadda bulshada Vkontakte loo soo daayo.
Waxa la sameeyo haddii dhejinta adag tahay 100% si joogto ah u rakibay
Isticmaalayaal badan ayaa ku galay xaalad marka nidaamka uu bilaabay inuu si tartiib ah u shaqeeyo, Maamulaha Hagista wuxuu muujiyay xajmiga ugu badan ee ku yaala qalabka adag. Tani waxay dhacdaa marar badan, waxaana jira sababo gaar ah oo tan. Ku dhejinta culus ee buuxa Isagoo tixgelinaya in arrimo kala duwan ay sababi karaan dhibaato, ma jirto xal caalami ah halkan.
Sida loo casuumo kooxda VKontakte
Sidaad ogtahay, bulsho kasta oo ka tirsan shabakada bulshada ee VKontakte ayaa jira oo horumarinaaya oo keliya maaha kaliya maamulka, laakiin sidoo kale ka qaybgalayaasha naftooda. Natiijo ahaan, waxaa habboon in aad dareen gaar ah siisid habka aad ugu martiqaadeyso dadka kale inay u adeegsadaan kooxo. Si aan u bilaabno asxaabta, si loo bilaabo, waa in la ogaadaa in maamulka boggani uu siinayo qof kasta oo ka tirsan beesha shakhsi fursad uu ku soo diro casumaad.
Barnaamijka Microsoft Excel: ku dar boqolkiiba inta lambar
Inta lagu jiro xisaabinta, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in lagu daro boqolleyo tiro gaar ah. Tusaale ahaan, si aad u ogaatid heerarka hadda jira ee faa'iidada, oo kordhay boqolkiiba boqol marka loo eego bishii hore, waxaad u baahan tahay inaad ku darto boqolkiiba inta lagu saleeyo macaashka bisha hore. Waxaa jira tusaalooyin badan oo kale oo aad u baahan tahay inaad sameyso ficil la mid ah.
Isticmaalayaashu waxay wadaagi karaan faylasha iyaga oo isticmaalaya macaamiisha qaaska ah ee qulqulaya Mid kasta oo ka mid ah wuxuu bixiyaa shaqeyn kala duwan waxaana loo qaabeeyey baahiyo gaar ah, tusaale ahaan, raadinta ciyaaraha ama fiidiyoowga. Doodda soo socota waxay diiradda saari doontaa barnaamijka FrostWire, oo leh cayaar dhisme oo si sax ah u kobciya jihada muusikada.
Xallinta dhibaatooyinka isticmaalka isticmaalka CPU
Badanaa kombiyuutarku wuu bilaabaa inuu hoos u dhigo isticmaalka CPU. Haddii ay sidaas dhacdo in culayskiisu uu gaaro 100% sabab la'aan, markaa waxaa jira sabab looga walwalo iyo baahi degdeg ah oo lagu xalliyo dhibaatadan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo fudud oo kaa gargaari kara inaadan aqoonsan oo keliya dhibaatada, laakiin sidoo kale xalliya.
Sida loo isticmaalo muuqaalka feejignaanta feejignaanta ee Windows 10
In Windows 10 1803 April Update, muuqaal cusub oo la yiraahdo Focus Assist, nooc ka mid ah Horumarka Aan Haboonayn, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad joojiso ogaysiinta iyo farriimaha codsiyada, nidaamka iyo dadka waqtiyada gaarka ah, inta lagu jiro ciyaarta iyo inta lagu jiro fiidiyaha shaashadda. (saadaalinta).
Sida loo wareejiyo cinwaanka Google Chrome ilaa Google Chrome
Google Chrome waxay u qalantaa magaca ugu caansan caalamka, sababtoo ah waxay siisaa dadka isticmaala fursado firfircoon, oo ku xiran interface fudud oo macquul ah. Maanta, waxaan diirada saari doonaa si aan faahfaahin dheeraad ah u eegno, sida aad u bedeli kartid boggaga hal ereyga Google Chrome si Google Chrome ah.
Ku darista madadaalada PowerPoint
Inta lagu jiro soo bandhiga bandhigga, waxaa laga yaabaa in lagama maarmaan noqoto in la doorto wax kasta oo aan ku koobneyn oo keliya mugdi ama cabbir. PowerPoint waxay leedahay tifaftire u gaar ah oo kuu ogolaanaya inaad ku darto animate dheeraad ah qaybaha kala duwan. Hawlgalkani maaha oo kaliya inuu soo bandhigo aragti xiiso leh iyo midnimo, laakiin sidoo kale wuxuu kordhiyaa shaqadeeda.
Cusbooneysiinta Khariidadaha ku yaal Garmin Navigator
Darawalada iyo dadka safarka ah waa qarsoodi in waddooyinka magaalooyinka iyo waddamada badanaaba isbeddela. Iyadoo aan lahayn khariidado casriyeyn ah, marxaladdaha ayaa kugu hogaamin kara dhamaadka dhintay, sababtoo ah waxaad lumin doontaa waqti, kheyraad iyo nerves. Milkiilayaasha Garmin ee hagaajinta ayaa loo bixiyaa laba siyaabood, waxaanan eegaynaa labadaba hoos.
Sida loo isticmaalo erayga sirta ah Windows 8, 8.1
Hello Isticmaalayaal badan oo ka mid ah nidaamyada cusub ee hawlgalka Windows 8, 8.1 ayaa lumay markii aysan jirin tabo lagu abuurayo ereyga, maadaama ay ahayd OSsyadii hore. Qodobkan waxaan jeclaan lahaa in aan tixgeliyo qaab fudud oo dhakhso ah sida loo isticmaalo sirta Windows 8, 8.1. Marka la eego, lambarka sirta ayaa loo baahan yahay in la soo galo mar kasta oo aad kombiyuutarka aad u jeediso.
Sida loo doorto ugu fiican: isbarbar dhig qaababka kala duwan ee Windows 10
Navigatives offline for Android
Dib-u-soo-saarka cusub ee Windows 10
Jadwalka miisaanka qoraalka ee MS Word
Sida loo kordhiyo muusikada iPhone via iTunes
Goobta dukaanka aad ka iibsan karto kombuyuutar ayaa bixiya noocyo kala duwan oo deyn ah. Inta badan dukaamada online waxay bixiyaan fursad ay ku iibsadaan kombiyuutar ku saabsan internetka. Mararka qaar, suurtogalnimada iibsigu wuxuu u muuqdaa mid soo jiidasho leh - waxaad ku heli kartaa deyn aan lahayn lacagta dheeraadka ah iyo bixinta lacag bixinta, xaaladaha sahlan. Read More
Sababtoo ah bogga uusan u furmin barta shabakada, xalka dhibaatada
Diskoonka la soo xulay waxaa ku jira miisaanka qaybta MBR.
Copyright © 2020 Qalabka kombiyuutarka PC
https://termotools.com so.termotools.com © 2020